Ujongo loLwandle lweVilla yabalobi ( Ikhaya elonwabileyo)
Indawo yam yokuhlala yobunewunewu ephambi kwehlathi lemangrove ngaselwandle kwilali encinci yabalobi Ungalibona ilanga liphuma elwandle rhoqo ekuseni. Uya kuchukumisa ngokwenene indlela yokuphila yelizwe.Kufuphi, kukho unxweme oluhle lolwandle eHad Chao, Chao. -am kunye ne-Hua Hin, iitempile zembali. Le ndawo ifanelekile kakhulu kwiholide kwaye le ndlu ifakwe ngokupheleleyo ngegumbi lokulala eli-1 kunye ne-1 bahtroom, ikhitshi kunye nendawo yokuhlala, i-jacuzzi yangaphandle, iibhayisekile ezi-2 zinikezelwe.
Ndinamagumbi ama-5, amagumbi afakwe ngokupheleleyo ekhitshini kumgangatho ophantsi kunye neJacuzzi engaphandle, igumbi elinye lokulala elinebhedi enkulu kunye negumbi elinye le-baht.
Ubumelwane obujikelezileyo bulungile kodwa abakwazi ukuthetha isiNgesi kuphela ngoncumo.Kufuphi nevilla, kukho iiresort, iihotele kunye nevenkile yokutya kwaselwandle yasekhaya apho abantu abasebenza apho banokuthetha isiNgesi, nangona kunjalo, hayi kakhulu. Kukho iivenkile ezinkulu, ivenkile yekofu, eyembali. itempile .Singenza amalungiselelo okuthenga ukhenketho lwephakheji yokhenketho lwedolophu olunye okanye ukhenketho lwaselwandle nokuba yintsuku ezimbini ukuya eHua Hin, ulwandle oludumileyo eThailand.
Ndiyayiqonda into efunwa ziindwendwe zasemzini xa zisiya kude nekhaya. Ngoko ke ndiya kukhathalela kwaye ndiya kunika ulwazi kangangoko ndinako. Le yeyona ndawo intle kakhulu yokuhlala kule ndawo.